ပိုက်ဆံစုဖို့ ကြိုးစားနေရင် ဖုန်းထဲက ဒီ App တွေနဲ့ ဒီအမူအကျင့်တွေကို ဖျောက်လိုက်ပါ
14 Apr 2019 . 10:34 AM
နည်းပညာက အရမ်းကို တိုးတက်နေပါပြီ။ တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာအလျောက်လည်း ငွေကုန်ကြေးကျကလည်း လိုက်မြင့်တက်လာပါတယ်။ အရင်ဆို မုန့်စားချင်ရင် အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်ထွက်မှာစားလို့ ရပေမယ့် အခုဆို App ကနေ တစ်ဆင့်မှာတာ၊ ဒါမှမဟုတ် Facebook ကနေ ဖုန်းလေးခေါ်ပြီး မှာလိုက်တာနဲ့ မှာစားလို့ ရနေတော့ ပိုက်ဆံက ပိုကုန်လာပါပြီ။
ဒါကြောင့် ဒီနှစ်သင်္ကြန်က စပြီး ပိုက်ဆံစုဖို့ စိတ်ကူးနေရင် ဖုန်းထဲက တချို့ App တွေနဲ့ တချို့အမူအကျင့်တွေကို ဖျောက်ဖို့ လိုလာပါပြီ။
၁။ Food Delivery Service App တွေကို ဖျက်ပစ်ပါ
အားရင် ပျင်းရင် သူငယ်ချင်းတွေ စုမိရင်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ ဖုန်းထဲက Food Delivery Service App ကို ဖွင့်၊ တစ်ခုပြီး တစ်ခုမှာမိတော့တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ပိုက်ဆံစုချင်ရင် လွယ်လွယ်မမှာမိအောင် Food Delivery Service App တွေ ဖျက်ထားပါ။
၂။ Facebook လျှော့သုံးပါ
Facebook ဆိုတာလေ ပိုက်ဆံကုန်ပေါက်ကို အလိုလို ရှာပေးတဲ့ အရာကြီးပါပဲ၊ အဲဒီမှာ Online Shopping တွေ ရှိနေတယ်။ စားသောက်ဆိုင် Reviews တွေ၊ ကြော်ငြာတွေ ရှိနေတယ်။ Facebook မှာသာကြာကြာနေမိရင် OS က ပစ္စည်းတွေ မှာလိုက်၊ ချက်ချင်းဗိုက်ဆာလာသလို ဖြစ်ပြီး ပြေးပြီးသွားစားလိုက်နဲ့ ပိုက်ဆံကုန်တတ်တာမို့ Facebook လျှော့သုံးဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
၃။ In-App Purchase ပါတဲ့ ဂိမ်းတွေ ကစားရင် စိတ်ရှည်ပါ
Candy Crush၊ Coin Master စတဲ့ ဂိမ်းတွေကို ဆော့နေရင်း Spin ကုန်တဲ့အခါ Spin ပြည့်ဖို့ စောင့်နေရင်း စိတ်မရှည်လို့ ထဝယ်တဲ့ အဖြစ်တွေ ကြုံဖူးမှာပါ။ ၅ ဒေါ်လာလေးပဲ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးဆိုပေမယ့် ရေရှည်မှာတော့ ထိပါတယ်။ ပြီးတော့ ဂိမ်းတော်တော်များများက အခမဲ့ ကစားခွင့်ပေးထားပြီး အရှိန်မြင့်လာတဲ့အချိန်ကျမှ ဒီလို နည်းနဲ့ ပိုက်ဆံရှာကြတာကို သတိပြုရမှာပါ။ အားလပ်ချိန်မှာ ဂိမ်းကစားပြီး အပန်းဖြေတာ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းရှာထားတဲ့ ငွေကို ဂိမ်းထဲက Gold တွေ၊ Coin တွေ၊ Spin တွေ အတွက် သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ပိုက်ဆံစုဖြစ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အခရာပရိသတ်ကြီး အားလုံးပဲ ဘာမဟုတ်တဲ့ ငွေယိုပေါက်လေးတွေကို ကာမိရင်း နှစ်သစ်မှာ ပိုက်ဆံတွေ အများကြီး စုနိုင်ကြပါစေ။
by Ngul Ciin . 50 mins ago